Petroleum quartz - Petroleum tọrọ atọ - Fluorescent n'okpuru UV ìhè - Video
Buyzụta quartz sitere na ụlọ ahịa anyị
Quartz mmanụ bụ ezigbo kristal, “mmiri doro anya” kristal. Ihu ndị ahụ dị mma ma na-achọsi ike na-enweghị nhịọ akpọ, na-eme kwaaji zuru oke maka ihe ntinye ahụ na enweghị ndabichi n'ime ma ọ bụ kristal.
Ntinye kachasị anya bụ mmanụ ala a na-etinye n'ime cavities na kristal dị njọ. Ọ na-abụkarị na-egbukepụ egbuke egbuke na ụfọdụ ndị dịtụ aja aja.
Ụfọdụ n'ime ha nwere mkpụrụ ego methane n'ime mmanụ. Ụfọdụ na-aga, ụfọdụ na-anọ ọdụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke a na-ahụ anya, ọtụtụ oge, enwere obere mmiri n'akụkụ ọnụ ọnụ ụlọ ndị ahụ.
Ọtụtụ n'ime kristal ndị a na-ejikwa ụrọ na-acha odo odo na aja aja, aha otu maka hydrocarbons bituminous. A na-achọta ihe nchịkọta n'ime quartz n'enweghị onye ọ bụla na-ahụ maka mmiri ma mgbe ụfọdụ, a na-ahụ ya n'ime ụlọ ndị ahụ na mmanụ. N'okwu ole na ole na-adịkarị, ihe na-eme ka mpi ahụ na-agagharị n'ime oghere.
N'ụbọchị oyi, afụ ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ karịa ka ọ dị na mbụ ma ọ bụrụ na ị na-ejide ya ruo oge ole na ole, ọ na-enye ọkụ ma malite ịmalite ngwa ngwa ọzọ.
Nanị nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị. Ma nke kachasị, ọ na-egbuke egbuke na-acha anụnụ anụnụ n'oge ọkụ ọkụ UV.
Ọ bụ mineral nke silicon dioxide. SiO 2 usoro. Silica na-eti mkpu n'ụdị quartz. Banyere 14% nke jikọrọ ọnụ ụwa. Site na ezinụlọ nke quartz nke crystalline rhombohedral. Ọ dị n'ụdị kristal na-enweghị atụ. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ndị nna ukwu nke lithotherapy.
Site usoro hydrothermal, nkume ndị kachasị mma na-enwupụta na cracks. Ọ na-emepụta nkume ndị dị na silica. Ya mere, aha crystal nke nkume.
Ọ na-ejikọta ya na mmanụ ndị ọzọ. feldspars (albite, orthose, adular) ma gbakọọ. Mma nke kristal na-adabere na nkume egwu crystal. Karịsịa site na okpomọkụ nke hydrothermal ngwọta. Ha dị elu, ha ga-abụkwa ndị mara mma ma nwee nghọta. A na-ahazi ha n'usoro n'ụdị ọ bụla. Ya mere, na ùkwù nke crystals nke quartz na-eṅomi chrysanthemums.
Ụfọdụ nkume nwere ọtụtụ mineral na ụdị nke inclusions. Enwere mpempe ụkwụ, nakwa tourmaline, amphibole, ma ọ bụ ihe nkedo. Ihe osise nke ụfọdụ kristal bụ n'ihi ọnụnọ nke ihe dị iche iche. Dị ka ígwè oxides, nakwa manganese, ma ọ bụ itinye na mmanụ ndị ọzọ.
Quartz Petroleum si Afghanistan